पूर्वकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्दै विराटनगर अस्पताल(बिराट नर्सिङ होम) | Birat Khabar
पूर्वकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्दै विराटनगर अस्पताल(बिराट नर्सिङ होम)
एन्जु सिवाकोटी, विराटनगर । अब्बल सेवा दिदै आएको विराटनगर अस्पताल (विराट नर्सिङ होम) पुर्वकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्दै गएको छ । अध्याधुनिक सेवा र सुविधा प्रदान गर्दै आएको यस अस्पतालको सेवा सुविधा अझै प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उपचार सेवाकालागि सबैमाझ लोकप्रिय रहेको यस अस्पतालले पछिल्लोपटक गुणस्तरिय सेवा सुविधामा व्यापक रुपमा विकास गरेको छ ।
राम्रा अस्पतालहरुको होडबाजि चलिरहेका बेला विराटनगर अस्पताल पूवकै उत्कृष्ट अस्पताल किन भन्ने सवालमा अस्पताल प्रशासन प्रमुख पदम विनाडी भन्नुहुन्छ–‘जेनेरल सेवाहरु सबै अस्पतालले दिने गर्छन् । तर यस अस्पतालले विशेषयज्ञ सेवाहरु दिन थालेको छ । ओटीमा प्रयोग हुने उपकरणहरु अत्याधुनिक प्रविधिका प्रयोग गरिन थालेको छ । ओटीलाई मोडुलर ओटी बनाइएको छ , जुन अन्तराष्ट्रिय स्तिरको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरकै एडभान्स मोडुलर आईसीयू तयार गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई वल्ल बेबी कियर सेन्टरको स्थापना गरिएको छ । यस अस्पतालमा अन्य अस्पतालको तुलनामा परिस्कृत सेवाहरु उपलब्ध छन् ।
अहिले भएको संरचना प्रविधिलाई अझिै अत्याधुनिक बनाउने क्रममा नै रहेको उहाँले बताउनु भयो । बढी भन्दा बढी सेवा सुविधा दिने प्रयार सधै यस अस्पतालको मुख्य लक्ष्य भएका कारण पनि प्रविधिको विकासमा कन्जुस्याई नरहेको उहाँको भनाई छ ।
यस अस्पतालले एक सय पचास सिट क्षमता भएको हल तयार गरेको छ । जहाँबाट लाईभ कन्फेन्स गर्न सकिन्छ । अपरेसन थिएटरमा भइरहेको अपरेस लाईभ कन्फेन्स मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सकिन्छ । अपरेसन भइरहेको लाईभ कन्फेन्स देखाई प्रशिक्ष्यार्थीहरुलाई सिकाउन समेत सकिने पदम विनाडीले बताउनु भयो ।
यस अस्पतालमा विभिन्न विभागका एक सय दुई वटा आईसीयू बेड रहेका छन् । जस मध्य एघार वटा बेड क्षमतमको न्यूरो सर्जिमल मोडुलर आईसीयू सञ्चालनमा रहेको छ । जहाँ आईसीयू सम्बन्धि दक्षता प्राप्त गरेका डाक्टरहरुले सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । पूर्वाञ्चलमै आईसीयू सम्बन्धि दक्षता प्राप्त विशेषयज्ञ डाक्टरहरुले सेवा प्रदान गर्ने यो एक मात्र अस्पताल हो । आइसीर्यू कक्षमा काम गर्ने अन्य कर्मचारिहरुले पनि । आइसीर्यू सम्बन्धि पढाई गरेको तथा तालिम लिएको कर्मचारिहरु मात्र रहेको अस्पताल इन्चार्ज आईसीयू विशेषयज्ञ डाक्टर ललित कुमार राजवंशीले बताउनु भयो ।
मोडुलर आइसीयूमा रहेका बिरामीका परिवारहरुले घरबाटै बिरामीलाई हेर्न किने गरी कम्युटराइज्ड प्रविधिको समेत व्यवस्था रहेको डा. राजवंशीले जानकारी दिनु भयो ।
यस अस्पतालमा वेल्ल बेबी कियर सेन्टर सञ्चालनमा रहेको एनआईसीयू डिपाटमेन्ट अन्तर्गत रहेर एनआईसीयू हेरिरहनु भएको नवजात शिशु विशेषयज्ञ तथा बालरोग विशेषयज्ञ दिपराज अधिकारिले बताउनुभयो । समय नपुगि जन्मिएका शिशुहरु, कम तौल भएका शिशुहरु, तथा जन्मिएलगतै समस्या देखा परेका शिशुहरुलाई स्पेशललाइस्ट गर्ने गरेको डा. अधिकारिले बताउनु भयो ।
यस अस्पतालले पूर्वाअञ्चलमै पहिलो पटक न्यू ब्रोन मेटाब्रोन स्केनिङ गर्ने गरेको डा. अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । उहाँले यस सेवा अन्तर्गत नवजात शिशुको सुन्न सक्ने क्षमतालाई परिक्षण गर्ने, नवजात शिशुमा जन्मजात देखापर्ने समस्याको बारेमा परिक्षण गर्ने, सेवा उपलब्ध यस अस्पतालमा रहेको बताउनु भयो । यसकासाथै कङगारु मदर्स केयर सुविधा प्रधान गर्ने गरेको जानकारी डा. अधिकारीले दिनुभयो । यस सेवामा एनआइसीयू बस्नै पर्ने भएका शिशिुशरुलाई दिनको केही समय आमाको छातिमा राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाई छ ।